Umqokeleli wamathe ukwabizwa ngokuba yisampler yamathe, isixhobo sokuqokelela amathe, ityhubhu yokuqokelela amathe eDNA. Amathe ngumxube ontsonkothileyo ongaqulathanga kuphela iiproteni ezahlukahlukeneyo, kodwa kunye ne-DNA, i-RNA, i-fatty acids, kunye nee-microorganisms ezahlukahlukeneyo. Uphononongo lufumanise ukuba amacandelo eprotheyini ahlukeneyo egazini ar...
I-tube yesampula ye-virus elahlayo eveliswa ngu-J.able Bio ineenkcazo ezahlukeneyo, ezinokuthi zihambelane neentlobo ezahlukeneyo ze-swabs, umthamo we-liquid yokugcina, njl., indlela yokukhetha i-sampling tube kit ngokuchanekileyo? Inokukhethwa kwimo yesampula kunye nenjongo. Imowudi yesampulu: ukusetyenziswa kanye, 5 ...
I-J.able Bio yafumana i-CE-IVD evunyiweyo kwikiti yokuqokelela amathe
I-Saliva Collection Kit, eyenziwe ngu-J.able Bio, emva komgudu wokusebenzisa i-CE kwiinyanga ezimbini, ekugqibeleni sifumana imvume yiJamani DIMDI Ikiti yokuqokelela amathe iqukethe i-funnel, cap, ityhubhu kunye / okanye isisombululo sokugcina. Kuqokelelwa amathe omntu sam...
Ukuthelekiswa kwee-VTM ezimbini: iVTM engasebenziyo nengasetyenziswanga (imidiya yothutho lwentsholongwane) isetyenziselwa ukuqokelela, ukugcinwa, ukuthuthwa kweesampulu zentsholongwane eziqhelekileyo, ezifana nentsholongwane ye-corona, iintsholongwane zomkhuhlane, intsholongwane ye-HFMD, njl njl. ikhusela into echongiweyo yentsholongwane...
Iimveliso zifumene i-CE yonyango kunye nesatifikethi se-FDA. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya iisampulu ezilahliweyo, intsholongwane elahlayo okanye ikiti yesampulu yeDNA, i-cotton swab elahlayo, isampulu yomlomo wesibeleko elahlayo kunye nebrashi yesampulu eyinyumba, eveliswe kwisiqinisekiso se-GMP...
Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Buccal Swab Collection Kit, Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo,